Tababaraha xulka Brazil Tite oo talooyin muhiim ah ee ku aadan mustaqbalkiisa u jeediyay Neymar Jr – Gool FM
Tababaraha xulka Brazil Tite oo talooyin muhiim ah ee ku aadan mustaqbalkiisa u jeediyay Neymar Jr
(Brazil) 18 Juunyo 2019. Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa talooyin muhiim ah ee ku aadan mustaqbalkiisa u jeediyay xiddiga ay isku wadanka yihiin iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr.
Mustaqbalka Neymar Jr ayaa murun xoogan ku jiray dhawaantan, kaddib hadalada kasoo yeeray madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi, waxaana lala xiriirinayaa inuu ka tagayo caasimada Paris.
Nasser Al-Khelaifi ayaa albaabka u furay Neymar Jr hadii uu doonayo inuu ka tago kooxda Saint-Germain, kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana tan iyo wixii xiligaas ka dambeeyay soo baxayay warar ku saabsan suurtogalnimada uu dib ugu laaban karo kooxdiisii hore ee Barcelona ama xitaa uu ku biiri karo Real Madrid.
Hadaba wargeyska “Marca” ayaa soo bandhigay wareysi uu Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite uu kaga hadlay mustaqbalka Neymar Jr waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Mustaqbalka Neymar Jr? tani waa arrin shakhsi ahaaneed iyo mid xirfadeed, anigu ma faragelin karo”.
“Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego inuu tago meesha uu ku dareemayo farxad sida bini aadamka, sababtoo ah waxay taasi sidoo kale ka caawineysaa xirfadiisa”.
Yeelkadeeda, tababare Tite ayaa sheegay in maqnaanshiyaha Neymar aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin xulka qaranka Brazil, sababa la xiriira inay heystaan ciyaaryahano kale ee awood u leh inay isbedel sameeyaan, wuxuuna iska diiday fikradda ah in maqnaanshihiisa ay saameyn ku yeelan karto kooxda.
Group-ka A ee Koobka Adduunka Dumarka oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO
Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga Javier Tebas oo shuruud ku xiray Neymar Jr, kahor inta uusan ku laaban Spain